အဘယ်သို့ငါဆရာဝန်ကိုသွားပါဘူး? ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်. | USAHello
သင်တို့သည်လည်းထဲမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် FindHello for healthcare providers in your city. ဤအပေးအတော်များများဒုက္ခသည်များနှင့်အခြားအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့နှင့်အာမခံခြင်းမရှိဘဲလူတွေကိုန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်.
For medical issues that are not emergencies, but you still needadoctor quickly, သငျသညျအရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုသွားပြီးလမ်းလျှောက်-in ကိုဆေးခန်းနိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားမကြာခဏညဦးနှင့်တနင်္ဂနွေနာရီရှိသည်နှင့်ရက်ချိန်းမရှိဘဲစောင့်ရှောက်မှုပေး.
1. အဓိကစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုရွေးချယ်ပါ. သင်နေမကောင်း get လျှင်ဒီကသင်၏အဓိကဆရာဝန်နှင့်သင်များသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးသွားပါပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်.
2. သငျသညျသစ်တစ်ခုဆရာဝန်ကိုတွေ့မြင်ရှိပါက, သင့်ရဲ့အာမခံခရီးစဉ်များအတွက်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကသင့်ရဲ့အာမခံကွန်ယက်များမှာသေချာအောင်. ဒါဟာသင်မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးသောမေးလ်ထဲမှာကြီးမားတဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုလက်ခံရရှိမှရှောင်ရှားရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်.
4. သငျသညျဆေးယူလိုလျှင်, သင့်ကိုအစဉ်ယူသောဆေးဝါးများများ၏အမည်များနှင့်အတူစာရင်းတစ်ခုဆောင်ကြဉ်း.